トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "ukungayi", iqabane iimvakalelo?
"A." isikhundla reverse intsingiselo
ngendlela yobungcali ka 3500 yen 'ithamsanqa-mathamsanqa ukufumana apreyizali ezamahala
nguye kwi Major Arcana kwekhadi "zokuzila" na, ukuba izinto abazinzileyo ubonisa. Esitalini Toka ukonga, kodwa kuthetha ukuba le meko yenziwe ngokuqinileyo ulawulo, Toka uyakwazi ukugcina ubuhlobo zikwimeko entle uthando, ubuhlobo ibonwa iimpawu zotshintsho eluthandweni, ukuze ikwathetha intsingiselo eyonwabileyo, ezifana, kuba isici yale khadi.
e eyayinethombo enkulu eyeyabo aninakwenza nto ukunyanzela nxi, kungoku Akunyanzelekanga ukuba kwenzeka utshintsho olukhulu kakhulu, kukuba akukho umqondiso wokuba kwenzeka kwixa elizayo kamsinya, mhlawumbi intsingiselo nokuzeyisa into emele . Ukuba
"zokuzila" nezinye iimvakalelo zomntu
sokuzila kwindawo entle ithathwa ukuba ibhekisele kwaphuma nge kwindawo entle, ukongeza, indawo yabo yangoku nto leyo ithetha ukuba imeko yangoku uzinzile okanye babe naye ukuba le meko nemiphumo emihle, oko kuthetha ukuba le meko basikelelwe izimvo neengcamango ukuba ngcono. In
uthando, kuba yena a uzive elungileyo kakhulu, ungeva nethuba lokuntdhula zibe uthando lo gama ngokuveza umgama phakathi kwakhe ngokuthe ngcembe. Eli khadi kulindelekile ukuba ubuhlobo kunye naye inkqubela. Ngenxa yokuba uziva ezimnandi kakhulu ukuba nani, ukuba luluvo olulungileyo ingqalelo ukugcina uzinzo yayo. Casual ngokweleka indlela, inokuba kwakhona crap yi uvumo kuye. Ukuba
"zokuzila 'kwindawo reverse iimvakalelo elinye qela
zokuzila reverse indawo ithathwa ukuba ibhekisele waphuma, okanye ukuya kwi worry yabo malunga nemeko kwixa elizayo, isimo neengcinga oku kubonisa ukuba kukho kungenzeka ukuba iya kuba lisibekele. De imeko ezinzileyo kwenzeka into enkulu, ezifana umdlalo-ukutshintsha, inokuba imeko uba ezingazinzanga Akunyanzelekanga, ukuze ungaphumi ukugcina imvakalelo nokuthantamisa, ukuze sibe angabathembi okanye emphefumlweni. Yiloo
uthando, ebusweni nje nzima kunye neengxaki, sibe iimvakalelo yakhe ibe asazi. Uya kuziva ixhala kunye namonde, ngoko kulula ukuba ukungasebenzi nto, ngaphandle koqwalaselo benelungelo iimvakalelo zakhe, ezingcono kumgama kuya kuba kuhle. Toka abe abasanda she ukuze elinye icala ukuba ukhathazekile, Toka ziya kuva amazwi ezifana ukuphazamisa uxolo lwengqondo yakho, unokuba naliphi na inani iimeko. Ukuba indawo reverse
nokuzeyisa waphuma, wayiphendula ukuqonda ukuhamba isiphelo, kubalulekile ukwenza nemibutho kweyabo. Kulungile na ukuba kangangoko kunokwenzeka ezilahliweyo, ezifana ukubawa kunye neminqweno yehlabathi na, ukwenza kube lula ukuqonda ngokuzola ukuhamba, kwaye ushiye umzimba kumsinga isiphelo uya bangasiwa plus ngenxa yokuziphatha yabo.